Fikarohana momba ny firaisana Ny Tranom-pitaovam-piombonam-piarahamonina ny mpanorina ny filozofian'ny William Quan Judge | Ny mpanangana rafitra mpanorina ny olombelona Ra Uru Hu - Fikarohana momba ny fitsanganana amin'ny maty
Ny fiainako, ny asa sy ny fikarohana dia matetika no tsapako ny lamina sy feon-kira ary ny tsiron-tsakay fototra ary mampifandray ireo fampianarana sy fihetsika ara-panahy samihafa izay mety ho tafasaraka amin'ny efa-polo taonany.
Mpinamana akaiky ahy sy izaho dia nanana fifanakalozan-kevitra lalina momba ny Ny rafitra momba ny olombelona, izay anisany mpandalina. Nanjary nazava tamiko tsara fa io rafitra io dia fitomboan'ny hazo iray ihany izay nisondrotra ny Theosophical Society ny faran'ny 19th ary aloha 20th taonjato.
Ankoatra izany, raha tsy nahita mijery sary aho, dia niaina mazava tsara fa ilay mpanorina ny rafitra fananganana olona, Ra Uru Hu, dia mpilalao lehibe tao amin'ny hetsika Theosophical voalohany. Rehefa nahita ny sarin'i Ra Uru Hu aho dia fantatro avy hatrany fa izy no fanahy Judge William Quan, izay mpanorina ny Theosophical Society. Raha zohina, Ra Uru Hu dia nanampy tamin'ny fampitomboana rantsana vaovao an'ny Theosophical Society taloha tamin'ny anarana hafa.
Ny parallèle mahaliana teo amin'ny fiainan'izy ireo dia ny fomba nahatonga ny Fikambanana Theosophical sy ny rafitra momba ny rafi-pandaminana ho an'ny olombelona, ​​izay toa nipoitra avy tamin'ny fampitaovana ara-panahy, izay nampahafantariny an'i Ra tao 1987 ho "Feo", raha ireo mpanorina ny Theosophical Ny fikambanana, anisan'izany i Helena Blavatsky, dia nanambara fa ny ampahany betsaka amin'ny fampianarany dia nampitain'izy ireo tamin'ny alalan'ny fihaviana ary indraindray ny Masters.
Fitoviana ara-batana: Amin'ity tranga ity dia mitovy ny fitoviana ara-batana ireo lehilahy roa ireo. Mitazona ny volom-bavany izy ireo ary ny saripika dia mampiseho fa nisafidy izy ireo hanao satroka hatsembohana na bobabola.
Ny fiainana taloha talenta sy ny fitondran-tena: Samy nizara fahalalana lalina momba ny metafysika ny mpitsara sy Ra Uru Hu, ary na dia teo aza ny tsy firaharahian'i Ra tamin'ny famoronana fandaminana, dia tahaka ny Mpitsara ihany izy, nampiseho talenta ho an'ny fandaminana sy fitaomam-panahy ho an'ny fiaraha-monina mba hanaparitaka fahalalana ara-panahy.